Ukukhupha i-Handle enye kwi-Faucet ye-Matte emnyama
Ezona mpahla zekhitshi zibalaseleyo 2020 | Ezona mpahla zintle zeKhitshi | Ikhompiyutha yasekhitshini
Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / Khupha iipompo zeKhitshi / WOWOW Yodwa-Ukuphathwa kwesiphatho sokukhupha i-Speeer ekhitshini
WOWOW I-single-Handle Pull-Out Sprayer ekhitshini ikhitshi
ikaliwe 4.67 Kwi-5 esekelwe kuyo 3 amanqaku umthengi
(3 ncomo ngumthengi)
Ukulungiselela lula, isitofu sokupheka ekhitshini kufuneka sikhethwe ngaphezulu, kwaye ukuphuma kwamanzi kufuneka kube kudala. Kungcono ukolula ngaphezulu kwe-drain, kwaye akufuneki uchithe amanzi. Ukuba kukho imibhobho yamanzi ashushu ekhitshini, olu luhlobo lwepheyile kufuneka luphinde kabini. Ukuze uhlangabezane neemfuno ezahlukeneyo zokusebenzisa, tyhila isitovu somnyama ekhitshini sinokujikeleziswa ngo-360 ° ngokubanzi.
Ndikhuphe isitofu ekhitshini
Zikhuphe ikhitshi ekhitshini ngelishwa akuqhelekanga. Ezi ntlobo zekhitshi lasekhitshini zeyona nto incinci ekhitshini onokuthi uyifumane. Ukanti banikezela uluhlu olukhulu lwezinto ezisebenzayo. Eyona nto iphambili kukukhupha ikhitshi lasekhitshini yeyona ndawo yokuntywila yamanzi apho unokufikelela khona kwikona nganye ekhitshini ekhitshini kunye nakwindawo ejikelezileyo. Ngokukodwa xa unesinki ekhitshini eliphindwe kabini, oku kukhupha isikulufu esincinci sekhitshi yeWOWOW ikunika konke ukufikelela. Isitshixo sokukhupha ikhephe elisekhitshini kwelinye icala sine-spout esifutshane. Intloko yesitshizi nangona kunjalo iyindlu kwiziphaluka, kodwa awuyi kuyibona le nto. Uya kuxhamla kuphela kwimbiza enkulu yamanzi.
Olunye uncedo oluhle lokukhupha isuti ekhitshini yikhomponenti ekhethekileyo eyakhiwe ngamacandelo ama-3 ahlala ixesha elide. Kulula ukujika ikhitshi lokukhupha ikhitshi libe ngama-360. Isikhupheli esincinci sekhitshi sele sineendlela ezincinci zokubonelela ukufikelela okukhulu kuwe kweinki zekhitshi. Le isuntswana elincinci lokukhupha ikhitshi lasekhitshini alizukubumba nasiphi na isithintelo nokuba yintoni. Kodwa njengokuba unako ukuguqula oku kukhupha isitofu sokuphuma ekhitshini iidigri ezingama-360 ngokunjalo, uya kuba nokufikelela okugcweleyo kwikhitshi lakho ekhitshini ngalo lonke ixesha, ngaphandle kokuthintelwa. Lo matshini wenziwe ngezinto ezomeleleyo, ngoko ke oku kuya kuhlala kunjalo.
Ibronze yokuthoba ibronze ikhuphe ispuni ekhitshini
Ukugqitywa kwamnyama koku kukhupha itawuli ekhitshini kukhethekile, kwaye awuyi kudibana nolu hlobo lokugqiba okuninzi kuyo nayiphi na impahla ekhitshini. Unokwenza uyilo lwekhitshi lakho lube lolunye ngokungafaniyo nalo mbala wephekwe ekhitshini. I-WOWOW ikhupha itawuli ekhitshini igqityiwe ngebronze yobhedu. Ngale ndlela ikhangeleka kakhulu njengefowuni ye-retro. Oko kunika isitayela sakho sekhitshi ngokuqinisekileyo ukubanjwa okukhethekileyo. Kunye nokugqitywa kwe-quartz emnyama, kunika ubuhle ekhitshini lakho ngokunjalo. Kwaye ngokuqinisekileyo ihlala ixesha elide, kungoko i-faucet yakho yasekhitshini ikhuselwe ixesha elide.
Ngaphambi kokuba uthathe isigqibo malunga nepheyile yakho yasekhitshini, ngokuqinisekileyo kufuneka ucinge nzulu ngaphambi kokuba uthathe isigqibo. Uphando lubonakalisile ukuba isitofu esisekhitshini yenye yezona zinto zijolise kuyo nayiphi na ikhitshi. Yiyo loo nto, ingqalelo yabantu itsalekwa ngokuzenzekelayo kwifonti ekhitshini lakho. Oko kukuxelela ukuba ukhethe ikhomputha yakho yasekhitshini ngobulumko. Kubonakala ngathi unokwenza impembelelo entle ngephedi ekhitshini lakho. Ngenxa yoko, oko kuthetha ngendlela elungileyo, kodwa nakwindlela embi. Ngokuqinisekileyo unokuyinika ikhitshi lakho ukuphakama okukhulu ngefenitshala ekhitshini lakho. Kwelinye icala, xa usenza isigqibo esingalunganga, unokuthoba isitayile ekhitshini. Ku-WOWOW sithanda ukukunikeza ezona faveniti zasekhitshini zekhitshi lakho elingezantsi.
Ixabiso elifanelekileyo likhuphe isitofu ekhitshini
Njengoko uchitha imali eninzi uyilo ekhitshini lakho, ufuna yonke into igqibelele. Ungathanda ukwakha ikhitshi lakho lamaphupha, ikhitshi osoloko uphupha ngalo. Ukwenza ikhitshi lakho lamaphupha, kubalulekile ukubandakanya iikhitshini zasekhitshini uyilo lwakho lwasekuqaleni ekhitshini. Njengoko sele kukhankanyiwe, itafile ekhitshini liyinxalenye yoyilo lwekhitshi lakho, kwaye ke kufuneka lihlale libandakanywa kwasekuqaleni. Nangona kunjalo, abaninzi abaqulunqi basekhitshini ababandakanyi, kwaye ushiye le nto ukuya kuwe ukuba uyithenge ngokwahlukeneyo. Kubalulekile ukuba ukhethe ikhitshi lekhitshi lakho kakuhle ukuze lenze ukuba libe yinxalenye yokudibanisa nekhitshi lakho.
Kwelinye icala, inyani yokuba isitofu sokupheka ekhitshini singafakwanga kuyilo lwakho lwekhitshi sikuzisela inzuzo: ungakhetha elona xabiso lilungileyo lemali unokuyifumana kwintengiso. Awuxhomekekanga kumthengisi wakho wasekhitshini oya kuthi ngovuyo uphindwe kabini okanye kathathu ixabiso lokukhupha isitofu sakho ekhitshini. Xa ukhetha ikhitshi lasekhitshini ngokwakho, unokukhetha ngokufanelekileyo isitofu esisekhitshini osifunayo. Ku-WOWOW uhlawula ixabiso elifanelekileyo lokukhupha isuti yakho yokuphuma ekhitshini, kwaye lolona khetho lulungileyo kuwe nakwisikhwama sakho.
Ukuhamba kwamanzi kukhupha itephu ekhitshini
Oku kukhupha isikulufu sokuphuma ekhitshini le-WOWOW sibonisa ukuhamba kwamanzi ngokubonakalayo ngeendlela ezimbini zamanzi: ukuphuma kunye nesitshizi. Ngezi ndlela zokuhamba kwamanzi unokuhlamba, ukugcwalisa, okanye ukucoca izinto ekhitshini lakho. Njengoko ukuphuma kwetawuli ekhitshini kukhutshiwe nge-aerator entsha ye-ABS, iqinisekisa umsinga wamanzi ogudileyo nosisigxina. Ngaphandle koko, olu phawu lodwa longa kukusindisa kakhulu kokusebenzisa amanzi. Le aerator ikugcinela i-50% yokusetyenziswa kwamanzi oya kuthi uyiqaphele kwityala lakho lamanzi. I-aerator inokususwa ngokulula, ukuba icocekile okanye ithathe indawo yayo.
Ngapha koko, le faiti isemgangathweni ophezulu wokukhupha ikhitshi lasekhitshini lenziwa ngezidibanisi eziqinileyo zobhedu ngombhobho wesinyithi ongenazintsimbi, kunye nesibhobho samanzi esinyithi. Ngenxa yezi zixhobo zodidi oluphezulu, iphuli ekhitshini inokuthi imelane nokugqwala kunye nokudumba. Ikhaphethi yeceramic ayinakushukuma ukukunika intuthuzelo yokugqibela usebenzisa le festi ekhitshini. Njengoko i-hose yamanzi nayo yenziwa ngentsimbi engenasici, inika ulwahlulo oluchasene nokuqhuma kwaye aluyi kunxiba nakukrazula. Le hose yamanzi iya kuhlala ibuyela ngokulula kwimeko yayo yoqobo. Inokuma uxinzelelo lwamanzi aphezulu ngaphandle kwengxaki.
Iwaranti ikhupha itawuli ekhitshini
Esi sidonsa esikhulu ekhitshini sisebenza nasetyenziselwa urhwebo. Ngenxa yokuphela kwayo okumnyama kwe-quartz emnyama, inokunyamezela ngokulula rust kunye nokukrala. Ke ngoko ibonelela ngomgangatho ohlala uhleli. Ngenxa yoko, i-WOWOW iyakwazi ukukunikeza iminyaka yesiqinisekiso seminyaka emi-5. Njengabaxhasi abaninzi basekhitshini laseKhitshini banikezela nje ngewaranti yonyaka o-1, WOWOW ngokuqinisekileyo wenza umohluko apha. I-Wowow ihamba ngaphaya kwayo yonke imigangatho yemizi-mveliso, kwaye uqaphela kuzo zonke iinkalo zokukhupha isikulufu sokupheka ekhitshini. Isikhephe sakho sokuphuma ekhitshini sine-inshurensi kunye nesiqinisekiso sokubuyiswa kwemali kwiintsuku ezingama-90. Ngale ndlela awugijimeli nakuphi na umngcipheko ngetofu ekhitshi enkulu. Izibonelelo zokukhupha isuti ekhitshi ekhitshini ngokungakhathali: • Inika into eyikhitshi kuyo nayiphi na ikhitshi
• Ukugqitywa kwebronze i-oyile emnyama e-ruble emnyama
• Uyilo oluncinci
• I-Pragmatic khupha ithumbu lamanzi
• Yenziwe ngebronze esemgangathweni ophezulu kunye nezixhobo zensimbi
• Kulula ukucoca kwaye kulula ukuyigcina
Iwaranti yeminyaka emi-5
I-SKU: 2310501Q iindidi: IFaucets yasekhitshini, Khupha iipompo zeKhitshi tags: Ikhitshi lokuKhangela ekhitshini, Ukutsalwa kwesiphatho esinye, Isitshizi ekhitshini
16.8 x 11.4 x 3.5 intshi
Tsala ikhitshi laseKhitshini
Umsebenzi womphunga kunye nokutshiza
Plate enye yeDekhi
P *** r2021.02.09
ikaliwe 5 ngaphandle 5
ngale nto yokutsala ukutshiza, kulunge kakhulu ukuhlamba izitya okanye iimbiza. lo mbala ubuhle, kwaye akukho lula ukufumana amabala okanye ukushicilelwa kweminwe. Ndicinga ukuba ndiza kuthengela enye umama.
Enjani yona impompo enkulu! Sasinombhobho omde kakhulu phambi kwefestile yekhitshi lethu. Songeze nje izivalo zangaphakathi kwaye sasifuna ipompo ephantsi. Oku kwakufanelekile kwaye kuyisiqwenga somsebenzi esiqinileyo kwaye sinzima. I-hubby yam (ngubani onokufaka nantoni na) ithe kwakulula kakhulu ukuyifaka kwaye kulula kakhulu ukuyifaka kunompompo wethu wangaphambili. Ndiyakuthanda ukugqitywa okumnyama kwaye kujongeka kumangalisa ngesinki yethu yentsimbi engenasici. Siyavuya kwaye ngokuqinisekileyo siya kuthenga kwakhona. Bendinexhala lokuba izakubonakala incinci kakhulu kodwa ikhangeleka ilungile! Enkosi ngomsebenzi omkhulu, onzima kunye nemveliso eyenziwe kakuhle! Kwaye ixabiso lihle!
L *** a2021.05.18
ikaliwe 4 ngaphandle 5
Ithumbu elinomsebenzi onzima owenziwe kakuhle, inombhobho omde ngokwaneleyo ukuba ungafikelela ngakwisinki, ikwanayo neqhosha lokutshiza / lokuhamba ngaphezulu kwesiphatho ukuze utshintshe. Ubunzima obusezantsi kwethumbu (phantsi kwesinki) benza kubelula ukuba umbhobho urhoxe (akusayi kuphinda kubuyiselwe ithumbu endaweni) .Ndonwabile ngokuthenga…
WOWOW Matte Black Tola-Down Spray ekhitshini Faucet
WOWOW IKhitshi yeKhitshi yaseKinki yokuKhonkxa ngokuTyhola ukuphuma ...
WOWOW White Kitchen faucet Tsala ezantsi
WOWOW Pot Filler faucet over Stove in BrBr N ...